राजा होइन कुलमान जस्ता क्षमतावान मान्छे ल्याउनु पर्छ सहमत हुनेले १ सेयर गर्नुहोला
बरिष्ठ पत्रकार तथा चर्चित अधिवक्ता स्वागत नेपालले राजा ल्याउने होइन कुलमान जस्ता क्षमतावान व्यक्तिहरु ल्याउनु पर्ने बताएका छन । एक मिडिया सँगको अन्तर्वातामा नेपालले कुलमान घिसिङ्ग, महावीर पुन, सन्दुक रुइत, गोबिन्द केसी
जस्ता मान्छेहरुले यो देश चलाउनु पर्ने बताएका छन । राजतन्त्रका विरुद्ध लेख्दा आफुलाई आखामा पट्टि बाँधेर राखिएको स्मरण गर्दै, निरंकुस राजतन्त्रमा भन्दा अहिलेको लोकतन्त्रमा सडकमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न प्रतिवन्द
नभएकाले राजावादीहरुले आन्दोलन गरिरहेको बताएका छन । साथै अहिले सडकमा राजतन्तको माग गर्दै निस्किएको जुलुस विकृत संसदीय व्यवस्था र अहिलेको सरकार प्रतिको वितृष्णाको परिणाम भएको पनि उनले तर्क गरेका छन । अहिले राजा
फर्काउनु भन्दा कुलमानलाई कार्यकारी बनाउन उपयुक्त हुने । भन्दै कुलमान जस्ता क्षमतावान र सारा जनताले रुचाएको मान्छेलाई मुलुक चलाउन दिनु पर्ने तर्क गरेका छन । जनताले रुचाएको मान्छेलाई मुलुक चलाउन दिनु उन्नत लोकतन्त्र भएको
नेपालले बताएका छन । अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले के एउटा जनजातिको छोरा यो देशको राष्ट्र प्रमुख हुने दिन कहिले न आउने ? भनेर पनि प्रश्न गरेका छन । साथै उनले राजतन्त्र हटाउने पनि विदेशी र अहिले राजतन्त्र ल्याउन खोज्ने पनि विदेशी शक्ति नै रहेको बताएका छन । सबैको जानकारीको शेयर गर्नुहोस !!!